Iyadoo dhererka waqtiga Internet Radio ayaa sidoo kale qaadan muhiimadda ay leedahay marka ay timaado shirkadaha music guud iyo kuwii ku caashaqi jiray music kuwaas oo doonaya in la hubiyo in uu baahan yahay waxaa lagu sameeyaa iyada oo aan duuban barnaamij kasta oo kale ama xataa cadcadka mid ka mid ah hees ama la xiriira video ah. Windows Media Player arrintan la xiriira sidoo kale in la hubiyo in ugu fiican iyo kan gobolka ee barnaamijka fanka aan la gundhig oo keliya, laakiin dadka isticmaala ay sidoo kale ka heli natiijada ugu wanaagsan ee la xidhiidha dhagaysiga raadiyaha internetka. Tutorial waxa kale oo hubin doona in jidadkayga oo dhanna sida la muujiyey waxaa si user ah.
Qaybta 1aad: Sida loo maqli radio online windows media player
Qeybta 2: Sidee si ay u qoraan radio ka windows media player?
Qeybta 3: Top 3 software in ay dhegeystaan ​​idaacadaha oo ka khayr badan windows media player.
Sidoo kale waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka qaababka farshaxan ah windows media player ah taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah muuqaalada tahay by helitaanka ciyaaryahan kaas oo sidoo kale u baahan yahay download ma at dhan oo kaliya. Si loo hubiyo in radio internet-ka waxaa la heli iyo maqli Waxa lagu talinayaa in la hubiyo in user in ay raacaan tutorial ah in loo qoray sida soo socota si loo hubiyo in ugu fiican iyo tallaabooyinka ugu horumarsan yihiin xiriiraa qasabno ugu yar in ay yihiin loo baahan yahay in arrintan la xiriira. Hagaha ma aha mid fudud oo keliya, laakiin waxa uu sidoo kale la socotay ee Screenshot in looga baahan yahay in arrintan la xiriira si loo hubiyo in ugu fiican iyo tutorial ugu horumarsan aan qoraal oo kaliya laakiin user sidoo kale uu helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah habka loo marayo dalabka lagu sameeyo gudaha wakhtiga ugu yar ee suurto gal ah. Tallaabooyinka lagu xusay in sidoo kale waa mid aad u faahfaahsan oo user hubaal ma aha in ay uuga fuudh wheel si aad u hesho wixii kaloo sameeyey wax waqti ah gudahood oo dhan. Geedi socodka sidoo kale waa mid fudud marka loo eego user fahamka sida users laylis sidoo kale hubin karaa in in hago waxaa laga codsadaa in ay ka buuxaan si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah geedi socodka tahay waxaa codsatay in arrintan la xiriira. Si loo hubiyo in user helo ma jiro, natiijada ugu fiican ee ka mid ah tallaabooyinka ay tahay in la iska indho tiri ama boodayo sida ay tahay sida kaliya ee in la hubiyo in qofka uu helo natiijada ugu wanaagsan wax waqti ah gudahood oo dhan.
1. hab maktabadda ee windows media player waa in la heli:
2.Beerta user markaas u baahan yahay si loo hubiyo in isku darka muhiimka ah ee ALT + V waa in la sii adkeeyey si aad u hubiso in hage warbaahinta heli:
Radio internet 3.Beerta waxaa markaas in laga heli si aad u hubiso in user ka helo doonaysay sameeyo:
4.The user sidoo kale ka heli kartaa raadiyaha channel la doonayo in la hubiyo in wixii kaloo la gebi samaysay iyo saldhigga la ciyaaray:
Waa in la ogaadaa in ay jiraan tobanaan kun oo barnaamijyo ah oo loo isticmaali karaa si loo hubiyo in radio internet waxaa lagu diiwaangeliyaa oo user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay marka la eego duubo. Si loo hubiyo in natiijooyinku ay waafaqsan yihiin shuruudaha ka mid ah dadka isticmaala waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in TunesGo Wondershare la soo bixi oo lagu rakibay sida ay ugu fiican iyo kan gobolka ee barnaamijka tahay taas oo ka dhigaysa hubiyo in user ka helo ugu wanaagsan oo gobolka ka mid ah natiijada tahay in arrintan la xiriira ka. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in tallaabooyinka lagu xusay in arrintan la xiriira yihiin kuwa ugu fiican iyo waayo, ninna u sabab la mid iyaga ka mid ah waa la boodayo waa sida ay muhiim u yihiin la sameeyo.
TunesGo Wondershare ayaa sidoo kale waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka ee barnaamijka fanka kaas oo sidoo kale u ogolaataa user ay u hagaagsan playlist in la badbaadiyey la Lugood ama qalabka Android. Barnaamijkan waa la cusboonaysiiyaa oo ay taageerto shirkadda iyo sabab la mid ah user marnaba wajahaya arrin kasta oo la xiriirta updates sida ay ku rakiban yihiin iyo soo bixi by barnaamijka si toos ah u ogolaanaya user si aad u hesho muuqaalada sare waqtiga oo dhan. Geedi socodka waa sida soo socota taas oo uu helo natiijada ugu wanaagsan:
1. Download iyo insteall Software ka Wondershare TunesGo
2.Beerta user waa inay hubiyaan in radio TuneIn waxa loo heli dibna maktabadaha waddada> taariikhqorihii waa in laga heli:
Record 3.Beerta button waa in la sii adkeeyey si loo hubiyo in hannaanka dhamaado sida ugu dhakhsaha badan button duubay ayaa la sii adkeeyey iyo saacadda sidoo kale bilaabo:
Ka dib waa barnaamijyada software saldhigga saddex radio in ay yihiin si ka fiican Media Windows ka Player sida ay la socoto technology ugu fiican:
1. Readon TV, Movie iyo ciyaaryahanka Radio
Readon Corporation waa horumarinta of this stuning ciyaaryahan radio internet taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo ugu fiican iyo gobolka processing tahay ee la xiriirta radio internet-ka. Ciyaaryahanka ayaa gebi ahaanba waa mid lacag la'aan ah iyo sabab la mid ah saamiga dajinta sidoo kale waa heer sare ah. Waa waa in ay leeyihiin kuwa isticmaala oo dhan, kuwaas oo ka daaleen isticmaalaya Windows Media Player.
Sidoo kale waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican ee radio oo la hirgaliyey iyada oo u shaqeeya ee lagu duubo iyo sabab la mid ah waxa ugu fiican ee loogu talagalay dadka oo dhan isticmaala ku jira caado ah duuban ama heeso qoro ka raadiyaha online. Interface waa user saaxiibtinimo iyo ciyaaryahanka gabi ahaanba waa bilaash ah si ay u isticmaalaan.
Sidoo kale waa mid ka mid ah idaacada ugu wanaagsan taas oo ka dhigaysa hubiyo in ku dhawaad ​​kasta iyo qaab kasta oo user ku fikiri karaa in la soo taageero iyo sabab la mid ah waxaa loo arkaa radio ugu fiican ee jeer oo dhan. Interface ayaa Garaafka iyo fududahay in la isticmaalo wax yaabahan in user a ma iska indho tiri karin iyo radio tan ayaa sidoo kale la siiyaa gobolka adeegyada tahay waxaa haya'ad ah.
> Resource > WMP > 3 talooyin taageerayaasha radio in isticmaalka daaqadaha media player